Wefti Siciid Deni Hogaaminaayo oo Isugu Jira imaaraat iyo israail oo gaadhay gobolka… – KHAATUMO NEWS
Wefti Siciid Deni Hogaaminaayo oo Isugu Jira imaaraat iyo israail oo gaadhay gobolka…
DEG DEG: Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa safar aan la shaacin ku tagaya magaalada Caluula (Gardafuu) ee cirifka u dambeeya Soomaaliya, halkaas oo muhiimad weyn ku fadhida, ahna aaga ay isku hayaan dalal badan oo isku haysta gudaha Soomaaliya.
Safarka Deni, waxaa qeybka ah xubno Sirdoon oo kasocda dalal Shisheeye, gaar ahaana Imaaraatka iyo dal kale, ujeedaduna waa in goobtas ay la wareegaan lagana hirgaliyo Saldhig Milateri oo ay Imaaraatku horgal ka yihiin, balse ay dawlad kale leedahay ciidanka la keeni doono.
Ilo Sirdoon, waxay xaqiijinayaan in mashruucan uu qeyb ka yahay walaaleynta Isreal & Carabta ee uu waday Madaxweynihii hore ee Mareykanka.
Previous Post: War Ka Soo baxay Imaaraatka Carabta Oo dawlada somalia lagu Bahdilay
Next Post: Deg Deg Daawo Mucaaradka DF Oo ka Badbaaday Dil
Asc. Adeercadifada ka daya qaranimada.kursiga xamar yaal putland baa ka miisaan badan .odayadi qrnigii 19aad lagaga baayacay barbera qadar lacaga . Waxay ingiriiska ugu jawaabee barbera waa go lagu qaado way ka weynka weyntahay. History repeats its self.ku ducaysta inaan dalkeenu gumaysi cusub yeelan
Viva Deni Jamhuriyada dimuqradiga puntlan waytashaneysaa soomalinimo ceelku dhacdey sugimeyso
Jamhuriyada Xortah ee puntland waa in aygoaan garaan dhulkoodana utashtaan kanatashadaan siyaasada madhaleyskaa ee xamar taal
Adeer Puntland dadkeedaa u tashanaya ikhtiyaarna u leh waxay doonaan inay sameeyaan cid wax laga warsanayaana ma jirto.
Way dhamaatay xilligii lagusoo gabban jiray Soomaalinimo ee laysku dul noolaan jiray. Imaaraad kan yeelay iyo Kenya ayaa kan yeeshay waxaa ku qadhaabta kuwa aan goboladooda waxba ka qabsan karin ee doonaya inay magac dowladeed ku qaraabtaan. Imaaraad baad sheegaysaaye wixii dadkaa dani ugu jirto Deni baa loo doortay isagaana looga dambaynayaa. If you don’t like too bad !